Nnwom 2 NA-TWI - Evanđelje po Mateju 2 CRO | Biblica América Latina
Nnwom 2 NA-TWI - Evanđelje po Mateju 2 CRO
Ɔhene a Onyankopɔn ayi no
1Adɛn nti na amanaman hyehyɛ adɔnyɛ ho? Adɛn nti na nnipa bɔ pɔw a ɛho nhia? 2 Wɔn ahemfo asɔre, wɔn sodifo ka bom bɔ pɔw tia Awurade ne ɔhene a wɔayi no no. 3 Wɔka se, “Momma yɛntwe yɛn ho mfi wɔn mmara ne wɔn tumi ase.”
4 Nanso Awurade te n’ahengua so serew, di wɔn nhyehyɛe hunu no ho fɛw. 5 Ɔbɔ wɔn kɔkɔ abufuw so, yi wɔn hu abufuhyew mu.
6 Ɔka se, “Masi me hene wɔ Sion bepɔw kronkron no so.”
7 Nea wasi no hene no bua se, “Mɛka asɛm a Awurade apae mu aka no. Ɔka kyerɛɛ me se, ‘Woyɛ me babarima; ɛnnɛ mayɛ w’agya. 8 Bisa me na mede wiase aman nyinaa bɛhyɛ wo nsa; asase nyinaa bɛyɛ wo dea. 9 Wode dade poma bedi wɔn so, na woabobɔ wɔn sɛ ɔnwemfo nhina.’“
10 Mo ahene, muntie saa kɔkɔbɔ yi. Mo a mudi aman so wɔ wiase, munsua sɛ: 11 Mobɛsom Awurade osuro mu. 12 Momma mo ho mpopo na monkotow no. Sɛ anyɛ saa a, ne bo befuw na moawu prɛko pɛ. Nhyira nka wɔn a woguan kɔtoa no.
NA-TWI : Nnwom 2